Semalt: Iingcebiso zoPhuhliso lwePlogin WordPress
Iiplagi zikhowudi ezinokufakwa kwiWindowsPress kwaye zinako ukuwandisa nokwandisa ukusebenza kwesayithi. Ivumela ukuba oku kusebenze ngaphandle kokufuna ukukhwabanisa ikhowudi yangundoqo. Ivumela ukongeza kweempawu ezingabandakanya iifayile ze-Facebook Open Graph kunye ne-Hotmail.
uFrank Abagnale, ingcali ephezulu iSemalt , igxininise apha malunga nomsebenzi onyanzelisayo kulo mba.
Isinyathelo sokuqala kukudala ifolda entsha kwi-WordPress kulekhonkco "i-wp-content / plugins /" ilandelwe ngokudala ifolda kuyo kwaye uyiqambe ngokuthi "yam-facebook-tags". Igama lefolda ye-plugin liyaziwa nangokuthi i-plugin's slug efunekayo ibe yodwa kwaye ingafumaneka ngokukhangela kwi-Google - curso fotografia digital.
Isinyathelo esilandelayo sakha ifolda kwifolda ye-Facebook kwaye ibiza igama elithi "my-facebook-tags" "p". Le khowudi kufuneka ilandelwe ngaphakathi kwefayili enkulu.
Emva kokudalwa kwe-plugin, kuyimfuneko ukudala isikhombi kumxholo othi "wp_head ". Kukho iintlobo ezimbini zeengwegwe ezizenzekelayo kunye nezihlunu. Ukwahlula phakathi kwezenzo kunye nezihlunu kukuba ezo zenzo zisebenza xa ikhonkco ifunyenwe yiWindowsPress kanti iifayile ziguqula iibitshi zedatha. Ukuzalisa i-plugin, kuyimfuneko ukongeza i-facebook meta tags usebenzisa i-hook wp_head usebenzisa ikhowudi elandelayo
Kufuneka ukhethe isikhokelo esilungileyo sokusetyenziswa kwisalathisi.
Njengokuba kushiwo ngaphambili, iifayile zisetyenziselwa ukuguqula izitshixo. Ngoko ke, kunokwenzeka ukuba utshintshe umyalezo wephutha owenzeka xa iphasiwedi engalunganga ifakiwe. Ngokomzekelo, xa iphasiwedi engalunganga ifakiwe kwi-www..umzekelo.com/wp-admin, umyalezo wephutha ungasuswa ngokufaka idatha ehlongoziwe. Umzekelo kwimeko elandelayo;
Uluhlu lwefayili "login_errors". Umyalezo wesiphoso ususwe ngokufaka idatha ehlungiweyo.
IziKhokelo kunye neeStyles ziyakongezwa ngokunyusa. Umzekelo ukongeza kwefonti yeGoogle leyo ifom yefestile. Kuboniswe ngezantsi;
Iifayili ziyakwazi ukulayishwa kwaye zigcinwe kwi-plugin isebenzise ukucinywa njengoko kuboniswe ngezantsi.
Ukudala kwekhasi lwezicwangciso ze-plugin
Kukho iindlela ezininzi zokudala iphepha kodwa enye inconywayo yindlela ejoliswe kuyo. Isinyathelo sokuqala kukudala imenyu apho izicwangciso zendlela yomsebenzisi zingasetyenziswa. "I-add_menu_page " ifanelekile kakhulu ekudaleni imenyu ephezulu ngenxa yezi zizathu ezilandelayo: isihloko sephepha, isihloko somxholo, ukukwazi, imenyu ye-slug, umsebenzi, icon kunye nesimo. Izicwangciso mazibe zibhaliswe. Umzekelo, ukuba sifuna ukubhalisa izicwangciso zomgcini-mvume silandela le nkqubo elandelayo.
Isinyathelo esilandelayo kukudala ifom eya kuba noxanduva lokubonisa umsebenzisi womsebenzisi. Le khowudi eboniswe ngezantsi kufuneka ifakwe ngaphakathi "kwimibuzo yam" ("my_plugin_settings_page").
Ezi zilandelayo zimele zithathwe
"Izicwangciso_imigangatho " kufuneka isetyenziswe kwaye iparameter yokuqala ifakwe njengeqela lokukhetha. Kwaye amagama asetyenziswa kwiiparamitha kufuneka asetyenziswe kummandla wamagama okukhetha. Umsebenzi "get_option " kufuneka usetyenziswe ukubamba ixabiso lentsimi kwaye ubekwe njengeprayimari yokuqala kwindawo yegama lokukhetha. Ifom yefowuni idalwe kufuneka ibonakale njengomfanekiso oboniswe ngezantsi.
Nangona kungenakudingeka ukunika inguqulelo, inokuba luncedo ngamanye amaxesha. Iinguqulelo zivunyelwe ngokusebenzisa le nkqubo elandelayo. Oku kulandelayo kufuneka kusetyenziswe ukugoqa itekisi rhoqo xa kukho iziganeko zokuphumeza umsebenzi "__ " okanye "umsebenzi" _e .